High-Bilie ingslọ - China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd.
Structurelọ ụlọ e ji ígwè rụọ bụ ụdị usoro ụlọ ọhụrụ, nke na-emepe ókèala mmepụta ihe n’etiti ụlọ ọrụ na-ere ala, ụlọ ọrụ ihe owuwu na ụlọ ọrụ na-emepụta ihe banyere ígwè ma jikọta ya na usoro mmepụta ihe ọhụrụ. Nke a bụ usoro ihe owuwu igwe nke ụlọ ọrụ na-amasịkarị.
E jiri ya tụnyere ụlọ ndị e ji eme ihe ọdịnala, ụlọ ndị e ji ígwè rụọ dochie ihe siri ike na mbadamba ígwè ma ọ bụ nkebi akụkụ, nke nwere ike dị elu na nguzogide nke ala. Ebe ọ bụ na enwere ike ịmepụta ihe ndị ahụ na ụlọ ọrụ ma wụnye ya na saịtị ahụ, oge owuwu ahụ na-ebelata nke ukwuu. N'ihi reusability nke ígwè, mwube mkpofu nwere ike belata nke ukwuu na ọ na-acha akwụkwọ ndụ nagburugburu ebe obibi, ya mere eji ya otutu ulo oru ulo oru na ulo ndi mmadu n’uwa nile. Ka ọ dị ugbu a, ntinye nke ụlọ ihe owuwu igwe na ụlọ ndị dị elu ma dị elu na-etolite etolite ma jiri nwayọọ nwayọọ bụrụ isi ụlọ ọrụ teknụzụ, nke bụ usoro mmepe nke ụlọ ndị ga-abịa n'ọdịnihu.
Ngwongwo ihe eji eme ulo bu ihe eji eme ulo. Ogidi, ogidi, trusses na ihe ndị ọzọ na-ejikarị akụkụ nke ígwè na efere ígwè na-etolite usoro ibu ọrụ. Ọ na-etolite ụlọ zuru oke yana ụlọ, ala, mgbidi na ihe owuwu ndị ọzọ.
Nrụpụta ngalaba ígwè na-ezo aka na-ekpo ọkụ akpọrepu n'akuku ígwè, ọwa ígwè, M-doo ya, H-doo ya na ígwè ọjà. A na-akpọ ụlọ ndị nwere ihe owuwu ndị mejupụtara ha bụ ihe eji arụ ụlọ. Tụkwasị na nke ahụ, efere ígwè ndị nwere mgbidi dị warara dị ka ọdịdị L, nke yiri U, Z na nke tubular, bụ́ ndị oyi na-atụgharị site na mbadamba ígwè ndị dị gịrịgịrị ma bụrụ ndị a na-amịkpọ ma ọ bụ ndị a na-emepụtaghị, na ụlọ ndị na-ebu ibu ndị na-ebu ha bụ́ ndị mejupụtara ha nke obere ígwè efere dị ka nkuku ígwè na ígwè Ogwe na-adịkarị na-akpọ ìhè ígwè bughi ụlọ. Enwekwara eriri USB ndị a kwụsịtụrụ na eriri nchara, nke bụkwa ígwè.
Igwe nchara nwere oke ike na mgbatị mgbanwe, ihe edo edo, ezigbo plasticity na ike, oke ziri ezi, ntinye dabara adaba, nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ngwa ngwa ngwa.
Site na mmepe nke oge, n'etiti teknụzụ na ihe ndị dị ugbu a, nhazi ígwè, dị ka ihe eji ebu ibu maka ụlọ, adịwo anya zuru oke ma tozuru oke, ọ dịwokwa ezigbo ụlọ ụlọ.
Ingslọ gafere ọtụtụ ala ma ọ bụ elu ga-aghọ ụlọ ndị dị elu. Ogologo mmalite ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke ala nke ụlọ dị elu dịgasị iche site na mba ruo mba, ọ nweghịkwa ụkpụrụ zuru oke ma sie ike.
A na-eji ọtụtụ n’ime ha na họtel, ụlọ ọrụ ọfịs, ụlọ ahịa na ụlọ ndị ọzọ.
Ndị Nne na Hospitalmụaka Hospital
Mahadum Complex Building